ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ ဆံပင်တွေကို ဘယ်အရာတွေနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြမလဲ ………….. | CosmeticMyanmar
Home » Article » ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ ဆံပင်တွေကို ဘယ်အရာတွေနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြမလဲ …………..
ကိုယ်တန်ဖိုးထားရတဲ့ ဆံပင်တွေကို ဘယ်အရာတွေနဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြမလဲ …………..
“မိန်းမတို့ဘုန်း ဆံထုံး” လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့လှပမှုတစ်ခုဆိုတာ မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်လို့မရတော့ပါဘူးနော်။ လှပနေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီနေတဲ့ ဆံပင်လေးတွေနဲ့မှ ပိုပြီးတင့်တယ်မှာလေနော့။ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့်ဆံပင်အရောင် Hair Style အမျိုးမျိုးကို ခဏခဏ ကောက်လိုက်ဖြောင့်လိုက် နဲ့ အမျိုးမျိုးလုပ်နေကြတော့ ဆံသားတွေပျက်စီးကုန်လို့ စိတ်ညစ်နေကြပြီလား??? အဲ့ဒီတော့ ထပ်ပြီးစိတ်မညစ်ပါနဲ့တော့လို့ အခုချိန်ကစပြီး နည်းလမ်း ကောင်းလေးတွေနဲ့ အသုံးတည့်မယ့် Product လေးတွေကို ညွှန်းပေးတော့မှာမို့ပါနော်။
ဘယ်လို Product လေးတွေလဲလို့ဆိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ့် Hair care Brand ထဲက Product လေးတွေပါပဲ။ My Back is Beautiful !!! လို့ဆိုတဲ့ PANTENE ရဲ့ GOLD SERIES လေးပါ။ အရင်ဆုံး GOLD SERIES မှာပါဝင်တဲ့ Product လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပြီး ဘယ်Product လေးက ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာလေးတွေနဲ့ ရလာနိုင်တဲ့အကျိူးရလဒ်တွေ, ဘယ်လိုဆံသားတွေမှာ သုံးရမယ်ဆိုတာလေးတွေကို ပါပြောပြပါ့မယ်လေနော့။ GOLD SERIES မှာဆိုရင် စုစုပေါင်း product ၈ မျိူးပါဝင်ပါတယ်။ GOLD SERIES မှာပါဝင်တဲ့ product ၈ မျိုးဟာဆိုရင် Scientists and Hair Stylists တွေကိုယ်တိုင် စနစ်တစ်ကျ စီမံပြီး Develop ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ product လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြိုပြီးတော့ပြောထားပါရစေ။
ကဲ …. ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Shampoo လေးပါ။ MOISTURE BOOST SHAMPOO လို့ဆိုတဲ့အတိုင်း ကောက်လိုက်ဖြောင့်လိုက်နဲ့ အပူဒဏ်ကိုခံရလို့ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီး ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံသားကို ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်း ပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ Shampoo လေးပါ။ လုံးဝ Cleaning လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် သဘာဝအဆီပါဝင်တာမို့ ဆံသားကို Style ကျနေအောင် ပုံသွင်းပေးမှာပါနော်။
ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Moiture Booth Conditioner ပါ။ Moisture Booth Shampoo လေးနဲ့ လျှော်ပြီး Conditioner လေးနဲ့ ထပ်လျှော်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝ Perfect ပါနော်။ ပါဝင်တဲ့ သဘာဝ အဆီတွေက ဆံသားထဲထိစိမ့်ဝင်ပြီး ဆံသားကို ပြုပြင်ပေးမယ့်အပြင် ပျော့ပျောင်းနူးညံ့သွားစေမှာပါနော်။ ဆိုးဆေးတွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေမပါဝင်ပဲ သဘာဝအတိုင်းဆံသားကို နက်မှောင်သန်စွမ်းစေမှာပါ။
တတိယ အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်တာလေးကတော့ Hydrating Butter Creme ပါ။ Creme ပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆံပင်အစိုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခြောက်သွေ့တဲ့ ဆံသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်။ Creme ကဆံသားထဲထိစိမ့်ဝင်သွားပြီး Moisturizing လုပ်ပေးတဲ့ အပြင် ဆိုးဆေးတွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေမပါဝင်ပဲ သဘာအဆီပါဝင်တာမို့ ကောက်ထားတဲ့ဆံသားတွေ နဲ့ သဘာဝအလျောက်ကောက်နေတဲ့ ဆံသားတွေကိုလဲ ပျော့ပျောင်းစေပြီး ပုံကျအောင်သွင်းပေးပါတယ်။ ဒီ Creme လေးကို လိမ်းထားခြင်းဖြင့် ဆံပင်ကောက်ကောက်လေးတွေရော၊ ဆံပင်အဖြောင့် လေးတွေကိုပါ 72 နာရီလုံးလုံး ရေဓာတ်ကို ထိန်းပေးနိုင်တဲ့အပြင် စတိုင်ကျလှပနေစေမှာပါ။
Leave-on Detangling milk ဆိုတဲ့ Product လေးကိုတော့ Damage Hair တွေအတွက် အဓိကထားပြီးညွှန်းပေးပါရစေ။ ပျက်စီးနေတဲ့ဆံသားတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမယ့်အပြင် ချော့မွေ့တောက်ပြောင်စေမှာပါနော်။
Hydrating Co-wash ဆိုတာလေးကတော့2in 1 Product လေးလို့ပြောရင်လဲမမှားပါဖူး။ Shampoo အနေနဲ့ရော Conditioner အနေနဲ့ပါသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဓာတုဆိုးဆေးတွေမပါဝင်ပဲ ဆံပင်ကို နက်မှောင်သန်စွမ်းစေပြီး ဆံသားပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးမှာပါ။
Intense Hydrating oil ဆိုတာလေးကတော့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် အဆီပါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့် ပျက်စီး ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ဆံသားတွေကိုတောက်ပအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့်အပြင် ဆံသားတွေကျန်းမာသန်စွမ်းအောင်လို့ ရေဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးပြီး လှပတဲ့ ဆံပင်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာပါနော်။
Curl Defining pudding ဆိုတာလေးကတော့ အဓိကအားဖြင့် Curly hair တွေအတွက် သီးသန့် product လေးပါ။ Curly hair တွေက သာမာန်ဆံပင်တွေထက် ရေဓာတ်နှစ်ဆလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ Product လေးဟာဆိုရင် Pro-Vitamin fomula အတိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာမို့ လိုအပ်နေတဲ့ ရေဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးပြီးလှပသေသပ်တဲ့ ဆံသားလေးတွေဖြစ်စေမှာပါ။
Repairing Hair mask လေးကတော့ Shampoo နဲ့ လျှော်ပြီးတာနဲ့ ထပ်သုံးပေးရမယ့် hair Mask လေးပါ။ All hair type အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပြီး ဆံသားအတွင်းပိုင်းအထိ ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးတာမို့ Damage hair တွေအတွက်ကတော့ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ product လေးပါ။ Effective usage လေးကိုလဲ ပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ် ခေါင်းလျှော်ပြီးတာနဲ့ Hair Mask လေးကိုယူပြီး ဆံပင်အနှံ့အပြား ကို ကုတ်လိမ်းပေးပြီး5–7မိနစ်ထားပေးရမှာပါ။ အဲ့ဒီထက်ပိုထားပေးရင်လဲရပါတယ်။ အချိန်ပိုကြာလေလေ ဆံသားက ပိုပျော့ပျောင်းလေမို့ပါ။
ကဲ အားလုံးပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဘယ်ပစ္စည်းလေးတွေက ကိုယ်နဲ့သင့်တော်ပြီး ဘယ်လိုရွေးချယ် သုံးသင့်တယ်ဆိုတာ သိလောက်ပြီပေါ့နော်။
အခုကစပြီး Pantene ရဲ့ Gold series လေးသုံးပြီး နူးညံ့ပျော့ပျောင်းပြီး ပုံကျလှပတဲ့ ဆံသားတွေကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ကြရအောင်နော်……!!
ဒါလေးကတော့ Pantene ရဲ့ Official Site https://pantene.com/en-us/shop-products/shop-gold-series-collection ပါနော်။ တခြား စိတ်ဝင်စားစရာ product တွေလဲအများကြီးတွေ့နိုင်တာမို့ အချိန်ရရင် ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့……
Super Red ပဲ့ကိုင်ရှင် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ Floral Series အကြောင်း